Imaanshaha wasiirka caafimaadka iyo baahiyaha Burco!
Tuesday 2nd June 2020 17:06:48 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Mudane Wasiir, waad ogayd oo cisbitaalka Burco, markii aad doorkiinii qaadan waydeen dad baa Ambulance ku deeqay!
Waad ogayd oo markii Oxygen la’aan loo go’ay, waa tii dhowr xabbo oo samirsiin ah loo yaboohay! Waad og tahay, oo Burco waa caasimadda labaad ee dalka, waana magaalada 2aad ee ugu dadka badan, sidoo kale wax ay isku xidhaa, bari iyo galbeed haddana guud ahaan adeeggeeda caafimaad kalsooni buuxda laguma qabo, oo waa ta bukaankii Burco maalin walba Hargeysa loola sii ordayo;
Annaga oo aaminsan in aad xukuumad ahaan dayacdeen doorkii horumarinta caafimaad ee caasimadda labaad ee dalka. Annaga oo og in aydaan soo gaadhsiin saamigii ay ku lahayd miisaaniyadda qaranku u qorsheeyay la dagaalanka Covid-19. Annaga oo og in deeqihii ganacsatadu bixisay iyo qalabkii la sheegay midna Burco soo gaadhin. Mar haddii aad maanta adigu Burco timi, wax aan ku wayddiin lahayn:
1- Ma siddaa PCR kii (mashiinkii Covid19 lagu baadhayay?) Haddii aanad sidin, maxaa looga yimi, waa ka Hargeysa dhex yaallee? Ma og tahay se in jawaabta Hargeysa laga sugaa, soo daahdo oo bukaannada qaarkood iyaga oo jawaabtii sugaya, ay geeriyoodeen?
2- Dhakhaatiirtu halis bay ku jirtaa, ee ma u siddaa qalabkii difaaca ee ay cudurkaas kaga gaashaaman lahaayeen?
3- Ma siddaa mashiinkii haamaha Oxygen ta lagu dhaaminayay (Oxygen Generator Mechine)? Mise Burco, haamo madhan oo ceelkii Hargeysa laga soo dhaaminayo, ayay habeen iyo maalin sugaysaa?
Saddexdaas baahiyood oo ah kuwa ugu waawayn ee xaaladdan la gu jiro, maanta Burco ugu baahi badan tahay, haddii aannu safarkaagani midna buuxinayn, bal maxaad siddaa?
[Daawo:-] Wasiirka Caafimaadka Oo Agab Lagaga Hortagaayo Cudurka Coronavirus Soo Gaadhsiiyay Burco.
Wasiirka Horumarinta Beeraha Oo Ka Hadlay Khudrada Dalka Go'an & Kulan Deg Deg Ah Oo Uu Isugu Yeedhay Gudiyada
Wasiirka Waxbrashada Oo Xadhiga Ka Jaray Maxktabad Cusub OO Ceerigaabo La Hirgeliyay [ Muuqaal ]
Wasiirka Xanaanada Oo Kala Diray Kooxo Ka Hawlgali Doona Gobolada Sool, Sanaag Iyo Togdheer [ Muuqaal ]
Wasiirka Maaliyada Somaliland Oo Furay Kulan Dib Loogu Eegayo Haanaanka Fulineed Ee Mashaariicda Baanka Aduunku Somalila